Quudinta Faraska | Fardaha Noti
La quudinta farduhu waa cunsur aasaasi ah si xayawaanka si wanaagsan loo daryeelo oo aan loo helin dhibaatooyin caafimaad. Sidaa darteed, way wanaagsan tahay in la ogaado noocyada cuntada waan iibsan karnaa ama ku xisaabtami karnaa fardaha.
Noocyada cuntada iyo waliba agabyada kale inaynu ku xisaabtameyno xoolaheena. Ma hilmaami karno in mararka qaarkood ay la soo dersaan dhibaatooyin nafaqo oo ay tahay in lagu xisaabtamo had iyo jeerna leh shuruudaha dhakhtarka xoolaha. Noocyada ugu fiican iyo waxyaabaha ugu fiican ee la quudiyo habka ugu fiican ee fardaha.
Waxaad ka heli doontaa waxaas oo dhan iyo inbadan oo ka mid ah meeshan, had iyo jeer la xidhiidha quudinta fardaha.
Maqaalka maanta waxaan uga hadlaynaa ereyga "nag." Dhawr maqaallo ayaannu caddaynaynay ...
Quudinta fardahayagu waa wax marwalba naga walwal qaba. Waa maxay badarka la bixiyaa, saami intee leeg? Ma macdanta ayaa la siiyaa ...
Fardahaasi ma cunaan? Miyaad hadda heshay ama korsatay faras oo aad jeclaan lahayd inuu weligiis caafimaad qabo? Xataa haddii…
Miyuu muhiim u yahay borotiinka faraska tartanka?
Faraska waa inuu ku daraa calafka xoolaha. Gaar ahaan fardaha tartanka ku jira. Waa badan tahay ...
Quudinta iyo caloosha faraska
Cunnadan lafteedu ma faragalinayso calool xanuunka faraska, laakiin qaadashada iyo ...
Sidee loo quudiyaa faras tartan
Quudinta faraska firfircoon ee ku tartamaya qeybaha kala duwan ma raaci karto isla cuntada sida a ...
Sida loo yareeyo buuqa iyada oo loo marayo nafaqada habboon
Faraska laftiisu waa xayawaan neerfa oo aad ugu nugul culeyska fekerka, gaar ahaan xilligan ...
Cunnooyinka nafaqada leh: Fibre
by Angela Graña samee 8 sano .
Fibre waa gabi ahaanba lama huraan cuntada faraska. Waa wax lala yaabo, maxaa yeelay annaga ahaan waxay muhiim noogu tahay dheef-shiidka, ...
Sababaha colic ee fardo
Mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee fardaha ku dhaca waxay la xiriiraan calool xanuun ama calool xanuun, isagoo ...
Tabaha lagu hagaajinayo muuqaalka faraska
Rag fuula badan ayaa raba in fardahoodu had iyo jeer u muuqdaan kuwo cajiib ah, iyagoo u eg kuwa filimada sidaa ...